🥇 ▷ Iyada oo leh aaladda loo yaqaan 'Samsung patent', kaamirada hore looma baahna doono: sidoo kale waxaan haysan doonnaa bandhigga gadaashiisa (sawir) ✅
Iyada oo leh aaladda loo yaqaan ‘Samsung patent’, kaamirada hore looma baahna doono: sidoo kale waxaan haysan doonnaa bandhigga gadaashiisa (sawir)
Samsung kuma cusboonaysiin shati-gareyaasha fikradaha mustaqbalka ee suurta galka ah. Sanado badan kadib markii laga shaqeeyey isku laabashada taleefannada gacanta, a patent in kara ka fadhiiso taleefanka selfie, ama taleefannadan oo loogu talagalay inay ugu jeclaadaan kuwa is jecel. Dabcan, xaqiijinta runtii maahan si dhakhso ah, laakiin waxay kuu horseedi kartaa (sii) badbaadinta booska hore.
Patent-gu wuxuu aadi lahaa ka saar kamaradda hore si aad u isticmaasho kaliya midka dhabarka ah. Si loogu oggolaado isticmaaleyaasha inay wax dhisaan, the bandhigay ugu weyn ayaa lagu “duudduuban” taleefanka ilaa intaad dhabarka ka tageyso.
AKHRISO: LG wuxuu ka fakarayaa taleefanka casriga ah ee jeebka naaska
Kordhinta shaashadda ayaa waliba keenaysa faa’iidooyin kale marka loo eego adeegsiga: xoogaa i cidhifyada geeska, qaybta kore (meesha soo bandhigga “duudduubyada” dib loogu laabto gadaasha) ayaa la dhigi karaa kontaroolada muusikada, ama tilmaamaha ku saabsan ogeysiisyada. Sidoo kale, shaashadda sare ayaa kari karay tus sawirro, laga yaabee inaad sifiican u soo jiidato indhaha kuwa u baahan in sawir laga qaado (sida carruurta yaryar).
Kahadalka iskii, markii aad dhaqaajiso habkaas shaashadda ugu weyn waxay noqoneysaa badhanka xirmo weyn, halka shaashadda sare ay muujineyso durista. Waa in la sheegaa (sida lagu arkay sawirrada qaar) muuqaallada oo dhan lama wada-qaybin karo iyo, mararka qaarkood, a goynta isku mid ah.
Sida had iyo jeer, si dhib yar ayaan u arki doonnaa taleefan leh astaantan mustaqbalka dhow. Su’aasha ugu weyni waa: faa’iidooyinka ayaa ka badan lahaa qasaarooyinka? Xaqiiqdi waa tikniyoolajiyad xiise leh, laakiin marka laga reebo “selfie freaks” shaashadda weyn waxay dhalisaa isticmaalka batariga badan. Maxay kula tahay
Via: Cinwaanada Android